Lee ị nwere ike ibudata akwụkwọ ahụaja nke gam akporo Q | Gam akporosis
Izu gara aga, Google kwupụtara atụmatụ ya maka gam akporo na ihe ndị ọzọ metụtara mkpanaka na desktọọpụ, ọ bụ ezie na nke a ruo obere, ebe ọ bụ na ụbọchị gara aga, ọ kwalitela ọkwa android Car. Mana ọzọkwa, ọ wepụtara beta mbụ nke gam akporo Q maka ndị nrụpụta ndị ọzọ.
Beta mbụ nke gam akporo Q maka ndị nrụpụta ndị ọzọ, ebe ọ bụ na ọ bụ nke atọ ka ọ na-ebupụta, ọ bụ ezie na ọ dị ugbu a, naanị Google Pixels dakọtara na ya. Beta ọhụrụ a na-arụnyere na akwụkwọ ahụaja na ndabara, akwụkwọ ahụaja ị nwere ike ibudata n'okpuru.
Ndabere nke beta nke atọ nke gam akporo Q, na-enye anyị ọchịchịrị acha anụnụ anụnụ nke ihe nwere ike ịbụ ... amaghị m. Ọ bụrụ na ịchọrọ akwụkwọ ahụaja a na-adịghị ahụ anya, m ga-ahapụrụ gị njikọ ka ị nwee ike budata ya na mkpebi mbụ ya.
Ihe ngosi nke ngosi nke gam akporo Q etinyela nkwenye gọọmentị, nke Google, nke ọnọdụ gbara ọchịchịrị, a mode na chepụtara na ọ ga-abata na ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ebe ọ bụ na ọtụtụ ngwa Google adịlarịrị na ọnọdụ a, ọnọdụ nke a ga-arụ ọrụ na-akpaghị aka na ngwa ahụ mgbe usoro ahụ na-arụ ọrụ.
Pixels ọhụrụ adịghị ọnụ
N'otu ihe omume a ihe ohuru Pixel 3a na 3a XL, ụfọdụ ọnụ ndị na-enye anyị ihe dịka atụmatụ ndị ahụ ebuputere n'afọ gara aga, Pixel 3 na 3XL na ngalaba foto, mana ya na nhazi ya n’adighi ike.
Ebe ọhụrụ ndị a, agbanyeghị na-enye atụmatụ mara ezigbo mma, dị maka euro 399 maka Pixel 3a na 479 euro maka Pixel 3a XL. Ee, maka ugbu a enweghị ike ịwụnye gam akporo Q beta ugbu a, ebe ọ bụ na Google ka adịghị enye nkwado gọọmentị maka ọdụ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ebe i nwere ike ibudata gam akporo Q wallpaper
Lelee ma nwalee na mbụ psychedelic nkịtị a na-akpọ XOB